Indlu yeeMoat ezithengiswayo eKent iza nePub kunye neMyuziyam - Ipropathi
Indlu yeeMoat ezithengiswayo eKent iza nePub kunye neMyuziyam
Ikhaya elinamagumbi okulala asithoba anezithuba zamaxesha aphakathi elinomatshini wokuhambisa amanzi, indawo yokupapasha, iimyuziyam zemoto zakudala kunye neehektare zomhlaba eziyi-110 zikwimakethi eCranbrook, Kent, nge- $ 4m.
Ngokubuyiswa ngothando ngabanini bayo bangoku, i-Moat House ibangela umdla ngokukhawuleza. Ngamagumbi amane abanzi okwamkela, izakhiwo ezingaphandle, iigadi ezintle ezifana nomzobo, izindlu zokuhlambela ezine kunye nemiqadi eyenziwe ngomthi ethe nkqo eluphahleni, ngokuqinisekileyo ikhathaza zonke iibhokisi ezifanelekileyo.
Ngaphakathi, ikhaya elinomtsalane lisasazeke ngezinto zobusela, kubandakanya isilingi esivelileyo, amaplanga odonga abanzi ajikeleze iingcango, iindawo zomlilo ezihonjisiweyo, izitena kunye nomgangatho welitye, iingcango zom-oki eziqinileyo kunye neefestile ezikhanyayo.
Indlu ephambili ene-7,274-square-foot inendawo yokuhlala kwimigangatho emithathu, kubandakanya amagumbi okwamkela abahlanu kunye nekhitshi / igumbi lesidlo sakusasa. Enye yezona zinto zinomdla ngaphakathi ekhaya ligumbi lokutyela. I-trompe-l '& oelig; il ceiling - entle kakhulu-ipeyintwe ngesandla ngomzobo wasemaphandleni (kujongeka ngathi inokuba yeyendlu uqobo). Siziindwendwe ezithile ezikonwabelayo ukutya azizukuyeka ukujonga phezulu.
Abanini bangoku bathenga umhlaba ongaphaya eMantla nase Mpuma wepropathi, besenza indawo encinci. Kunye nekhaya losapho elimangalisayo, kukho imyuziyam yemoto kunye nendawo yokupapasha enezixhobo ezizeleyo, eyaziwa ngokuba yiPlow Inn, yabanini abatsha ukuba bonwabele.
Izimvo zangasese zokulungisa izimvo 2019
Ngelixa ligcwele izinto zangaphakathi ezineminyaka ubudala, ikhaya libuye lale mihla, nalo. Xa ufika uya kuthathwa ngamasango entsimbi asebenza ngombane kunye nendlela enkulu egadwe. Kukho ithala elihle elihamba ngobude obupheleleyo be-façade esemazantsi mpuma yendlu. Apha, uya kufumana izimvo ezintle ngobuhle kumjelo wamanzi, igadi kunye nechibi eliqaqambileyo.
Njengento evela kwenye yepeyinti ye-watercolor ye-Monet, ibhulorho yomthi ekhokelela kumjelo ngokuqinisekileyo ngumfanekiso ogqibeleleyo. Enye yezona zinto sizithandayo apha ngumyezo we rose ovuyayo. Unokuthelekelela ukuba mhle kanjani oku kufuneka kubonakale kufika ehlotyeni.
Ibali elinxulumene noko
Intloko ngapha eMzantsi-ntshona wendlu kwaye kukho enye indawo enengca, ekhuselweyo zizityalo ezikhulileyo kunye nomzekelo. Abantwana bayakuthanda ukuthanda ukubaleka ngokukhululekileyo, ngelixa abantu abadala besitya i-alfresco phantsi kobushushu belanga.
Nabani na omnye onqwenela ukuba ibiyeyabo? Le propati ngoku ikwimakethi ye- $ 4,000,000 ngokudlula UKnight Frank .
Thatha ukhenketho kwikhaya ...
UKnight Frank UKnight Frank UKnight Frank UKnight Frank UKnight Frank UKnight Frank UKnight Frank UKnight Frank UKnight Frank UKnight Frank UKnight Frank UKnight Frank
benjamin moore imibala eluhlaza okwesibhakabhaka
13 zezona zipho zifudumeleyo zendlu entsha
Le ndlu intle yaseHertfordshire iyathengiswa iza nembali yayo yomoya
Indawo yokuhlala epaki ye-Deluxe Regent's ine-pub yayo
Le ndlu ye-deco yobugcisa inesifundo sayo segalufa esincinci
Indlu yelizwe laseKent ethengiswayo inendlu yayo yomthi
Indlu yokulala eyi-8 iyathengiswa e-Essex
Le ndlu inomtsalane eWales iza neqonga lalo labucala kaloliwe ...
yintoni iphepha lokunxibelelana
Yintoni ehambelana nemfusa
Ipeyinti yodonga oluhlaza okwesibhakabhaka
Igumbi lokulala eliluhlaza okwesibhakabhaka kunye nengwevu